Toyota Aye and Sons Road Show ကို August လ 27/ 28ရက်နေ့ Junction Square မှာ ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Fortuner, Hilux Extra Cab, Hiace ကားအမျိုးအစားတွေကို ပြသသွားမှာ ဖြစ်ပြီး Sale/Service Promotion အစီအစဉ်တွေ ၊ Unplugged Show အစီအစဉ်တွေနဲ့ အခြားခြားသောစိတ်ဝင်စားဖွယ် အစီအစဉ်တွေအပြင် လာရောက်သူများကို အအေးများနဲ့ ဧည့်ခံပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အထူးအစီစဉ်အနေနဲ့ လာရောက်သူအားလုံးကို ၁၀၀၀၀ကျပ်တန် Service Coupon တွေကို ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ လာရောက်ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
August 15, 2016 /0 Comments/in event /by nyanlynn
Toyota Aye and Sons မှ လာရောက်အားပေးမည့် မိတ်ဟောင်း၊မိတ်သစ်များကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန် သော Service Discount အစီအစဉ် Toyota Aye and Sons Service Stations များမှာ ငွေကျပ် တစ်သောင်း အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ စည်းကမ်းချက်များ ၁. ယခု online ကူပွန် သည် 2016 August ၃၁ ရက်နေ့ အထိသာ အကြုံးဝင်ပါသည်။ ၂. Toyota Aye & Sons Service Stations များ တွင်သာအကျုံးဝင်ပါသည်။ ၃. ငွေသားနှင့်လဲလှယ်ခွင့်မပြုပါ။ ၄. ကားတစ်စီး လျှင်တစ်ကြိမ်သာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ၅. ယခု online ကူပွန်သည် မည့်သည့် အခြား […]
http://toyota-ayeandsons.com/wp-content/uploads/2016/09/TTAS-Service-Coupon.png 674 741 nyanlynn http://toyotaayeandsons.webstarterz.com/adk/wp-content/uploads/2016/05/Aye-and-Sons-Logo_02-1-300x123.png nyanlynn2016-08-15 23:01:542016-09-08 10:11:50Online Service Coupon
မေလ ၁၅ ရက်နေ့ Toyota Aye & Sons Showroom မှာကျင်းပခဲ့သော Toyota Fortuner Launch Dinner Party Lucky Draw ကံထူးရှင်များ ကြွရောက်အားပေးကြသော ဧည့်သည်တော်များ စာချုပ်ချုပ်ဆိုဝယ်ယူကြသော Customer Toyota Fortuner ၏အောင်မြင်မှုများအတွက် အတူတကွပူးပေါင်းကြိုးစားခဲ့ကြသော ၀န်ထမ်း များအား ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
May 25, 2016 /0 Comments/in event /by nyanlynn
TOYOTA Customers များအတွက် အထူးအစီအစဉ် မင်္ဂလာပါရှင် ကျွန်မတို့ T.T.A.S Co.,Ltd မှ ကားအင်ဂျင်ဝိုင်လဲလှယ်ခြင်းအတွက် Discount ခံစားခွင့်များကို စတင်ပေးအပ်နေပါပြီ။ Customers များအနေဖြင့် Member Card ပြုလုပ်ပြီး Discount ခံစားခွင့်များကိုရယူနိုင်ပါသည်။ ကားအင်ဂျင်ဝိုင်လဲလှယ်နေစဉ်အချိန်တွင် Customers များအနားယူစောင့်ဆိုင်းနေနိုင်ရန် ကျယ်ဝန်းသန့်ရှင်းသော Air-con နားနေခန်း နှင့် အခမဲ့သုံးဆောင်နိုင်သော Coffee Stand များကို Customerများ စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေရန်အတွက် T.T.A.S Co.,Ltd မှ အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။ Toyota Aye and Sons Service Center သို့ မလာရောက်ဘူးသေးသော Toyota Cars Owner များကိုလည်း လိုအပ်သော car service များလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် T.T.A.S Co.,Ltd […]
http://toyota-ayeandsons.com/wp-content/uploads/2016/05/promotion.jpg 960 384 nyanlynn http://toyotaayeandsons.webstarterz.com/adk/wp-content/uploads/2016/05/Aye-and-Sons-Logo_02-1-300x123.png nyanlynn2016-05-25 10:28:562016-09-08 10:12:15Special Promotion
မန္တလေး Sky Walk Shopping Mall ရှေ့တွင် မေလ ၁၁ ရက်မှစတင်ပြီး Toyota Aye & Sons မှကျင်းပပြုလုပ်သော Road Show ပုံရိပ်များ Toyota Aye & Sons မှ မေလ ၁၁ ရက် မှ ၁၅ ရက်အထိ မန္တလေး Sky Walk Shopping Mallအရှေ့တွင် Toyota New Model ဖြစ်သည့် Toyota Fortuner 2016 Model အပါအ၀င် အခြားToyota 2016 Model များအား ပြသထားပါသဖြင့် မန္တလေးမှမိတ်ဟောင်းမိတ်သစ်များအား လာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ Road Show ကျင်းပနေချိန်အတွင်းတွင် စာချုပ်ချုပ်ဆို ၀ယ်ယူသူများအတွက် […]